Ny vatoharan-dranomasina miasa toy ny renirano any an-dranomasina - Maniry ny hikarakara azy ireo Reef Resilience
Ny vatoharan-dranomasina miasa toy ny rindrin'ny ranomasina - Miankina amin'ny fikarakarana azy ireo
Aug 4, 2014 | Vaovao
Nisy vondron'ireo mpikaroka nahita fa ny vatoharan-dranom-bary dia mampihena ny angovo angona amin'ny 97% ary ny haavon'ny haavon'ny 84%. Ny fianarana, navoaka vao haingana tao amin'ny diariny Nature Communications dia hita fa ny fihenan'ny fatiantoka ateraky ny vatohara dia manan-danja amin'ny olona 200 tapitrisa manerantany.
Tamin'ny fotoana nandraisan'ny tanàna, tanàn-dehibe sy firenena ny vola miditra amin'ny fiarovana ny toetr'andro sy ny toetr'andro, dia hitan'ireo mpanoratra fa ny fiarovana ny haran-dranomasina dia mampihena ny toe-karena ara-toe-karena, ara-tontolo iainana ary azo tsinontsinoavina raha oharina amin'ny vahaolana artificielle toy ny seawalls.
Manaraka lalindalina kokoa:
Vakio ny famintinana ny lahatsoratra ary afeno ny taratasy feno. Vakio koa ny mpiara-manoratra misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy famintinan'i Mike Beck ny fianarana sy ny fanazavana momba ny fampiharana ny fomba fitantanana ny vatohara tsara kokoa sy ny famerenana amin'ny laoniny ho toy ny ampahany amin'ny fihenan'ny rivo-doza dia lasa sehatra vaovao momba ny siansa sy ny fampiharana mahomby.
Vakio ny antony misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy haran-dranomasina dia mampitombo ny fahatezeran'ny ranomasina amin'ny mponina an-tapitrisany ary ny toe-pahasalamana, ny toerana, ny famerenana amin'ny laoniny ary ny fandrahonana ny harena mangatsiaka dia mety hanimba ny haran-dranomasina sy ny olona 200 tapitrisa manerantany izay miankina amin'izy ireo.